Umhlangano weShawei Digital Summer Sports
Ukuze kuqiniswe ikhono lokusebenzisana, inkampani yahlela futhi yahlela umhlangano wezemidlalo wasehlobo.Ngalesi sikhathi, kwahlelwa imisebenzi eyahlukahlukene yezemidlalo ukuze incintisane neChile ngenhloso yokuqinisa ukuhlangana, ukuxhumana, ukusizana nokuzivocavoca umzimba ...
SIGN CHINA —MOYU hola ifomethi yemidiya enkulu
UShawei Digital ubekhona ku-SIGN CHINA njalo ngonyaka, ikakhulukazi akhombise i- "MOYU", uphawu oluhamba phambili emakethe yezindaba zokuphrinta zefomethi enkulu.
I-LABEL EXPO EXHIBITION DIGITAL LABEL
U-SW LABEL ubekhona embukisweni we-LABEL EXPO, ikakhulukazi okhombisa LONKE uchungechunge lwamalebula weDijithali, kusuka eMemjet, Laser, HP Indigo kuya ku-UV Inkjet. Imikhiqizo enemibala ihehe amakhasimende amaningi ukuthola amasampula.
I-APPP EXPO eShanghai yemidiya yokuphrinta ebanzi ye-PVC Free 5M
I-SW Digital ihambele i-APPP EXPO eShanghai, ikakhulukazi ukukhombisa imidiya yokuphrinta yefomethi enkulu, ububanzi obukhulu bungu-5M. Futhi embukisweni wombukiso uphinde ukhuthaze izinto ezintsha zemidiya ye- "PVC MAHHALA".
Ukuhamba kweShawei digital Outdoor eThe Great Angie Forest
Ehlobo elishisayo, inkampani ihlele wonke amalungu eqembu ukuthi athathe uhambo lokuya e-Anji ukuze abambe iqhaza kwezokuvakasha kwangaphandle. Ngenkathi sisondela emvelweni futhi sizijabulisa thina, sibuye si ...